Allgedo.com » 2012 » October » 08
Home » Archive Daily October 8th, 2012
Qunsuliyada Soomaaliya ee waddanka Australia oo u hambalyeeyay Ra’isul wasaaraha cusub
Ra’isal wasaaraha Jamhuuriydda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid). Qunsuliyadda guud ee Soomaalida u fadhida waddankaasi Australia ayaa hambalyo iyo bogaadin u dirtay, madaxweynaha DFS mudane Xasan Shiikh Maxamuud, guddoomiyaha Baarlamamka DFS Maxamad Shiikh Cusmaan Jawaari, iyo raiisal wasaaraha cusub ee DFS Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”. Qunsuliyadda...
Moqdisho, Somali (AOL) – Shir ay maanta isugu yimaadeen Gudigii heerka Wasiiro ahaa iyo Hay’adaha Samafalka oo uu shir-gudoominayay Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga Cabdullaahi Goodax Barre ahna Gudoomiyaha Gudiga gurmadka fatahaadii ka dhacday Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobalka Hiiraan. Kulanka ayaa ahaa kii labaad oo ay isugu yimaadeen Gudiga iyo hay’adaha Maxaliga iyo...
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Oo Kulan La Qaatay Wafti uu Hogaaminayo Xooghayaha Guud ee Ururka Iskaashiga Islaamka
Moqdisho, Somalia (AOL) – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas iyo Xubno ka tirsan Golihiisii wasiirada ee hore ayaa kulan la qaatay wafti ka socda Ururka Iskaashiga Islaamka oo uu hogaaminayo Xooghayaha Guud ee Ururka Prof: Ekmeledin Ihsanoglu, iyo wafti kale oo ka socday Bangiga Islaamka waxayna ka wada hadleen sidii Ururka Islaamka iyo Bangiga Islaamku kaalin...
Madaxweynaha dowlada oo Uganda aaday sheegayna inuu la kulmayo Madaxda Kenya iyo Masar
Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud ayaa maanta ka anbabaxay Magaalada Muqdisho isagoo kusii jeeda dalka Uganda. Waxaa uu dalkaas kaga qeyb gali doonaa Munaasabad lagu maamuusayo sanad guuradii 50-aad ee xoriyada dalka Uganda. Kahor inta uusan ka bixin Magaaladda Muqdisho ayaa waxaa uu qabtay shir jaraa’id isagoo sheegay in uu casuumaad ka helay Madaxda dalkaas Uganda. Sidoo kale...
Faah Faahin: Dagaal Qasaaro gaystay oo ka dhacay Duleedka Baydhabo
Dagaal xooggan oo udhaxeeya ciidamada dowlada Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Itoobiya iyo Shabaab ayaa ka dhacay duleedka Magaaladda Baydhabo ee gobolka Bay. Dagaalkan ayaa ka danbeeyay kadib markii ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ay weerar ku qaadeen fariisimo ay Shabaab ku lahaayeen deegaanka Goof-guduud ee duleedka Baydhabo. Labada dhinac ayaa isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala...
Madaxda Dowlada oo la tashiyo bilaabay iyo waxa kasoo baxay kulan ay xildhibaano la yeesheen
Madaxda dowlada Soomaaliya ayaa xalay aqalka madaxtooyada kulan gaar ah kula qaatay Xildhibaano katirsan barlamaanka Soomaaliya taas oo ah latashiyadii ugu horeeyay. Kulankan ayaa waxaa looga hadlayay qodobo dhowr ah oo ay kamid yihiin sidii mudanayaasha barlamaanka ay u ansixin lahaayeen Ra’isul Wasaaraha cusub iyo nooca ay noqon doonto xukumada cusb ee la filayo. Waxaa ugu horeyn kulanka kahadlay...
Shabaab oo war kasoo saaray aragtidooda Ra’isul Wasaare Saacid Faarax
Xili dhawaan Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud uu magaaladda Muqdisho kaga dhawaaqay Ra’isul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya kaas oo loo magacaabay C/Faarax Garaad ayaa waxaa arimahaas ka hadlay Kooxda Shabaab. Afhayeenka Kooxda Shabaab Cali Maxamuud Raage ‘Cali Dheere” ayaa u sheegay Wakaaladda Wararka Reuters in aysan waxba iska badalayn mowqifkoodii kadib Ra’isul...
Taliska Militeriga dowlada oo sheegay in la isku furayo Wadooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo
Taliska Ciidamada Militeriga dowlada Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay sii socon doonaan Howlgaladda kadhanka ah Shabaab ee ka soconaya goboladda dalka. Isagoo lahadlayay saxaafada ayaa Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Gen. C. Kariim Dhaga-badan waxaa uu sheegay in qabashadii ay ciidamada isgarabsanaya la wareegeen Walaweyn ilaa deegaanka Leego ay fududeynayso in ay gaaraan deegaanada kale...
Jaaliyada Soomaaliyeed ee Dalka Yemen oo hambalyo u direysa Dr Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid)
Jaalidada Soomaaliyeed ee dalka Yemen waxay soo dhawaynaysaa magacaabista Ra’isul wasaaraha cusub ee Soomaaliya isla markaana u diraayan Hanbalyo ay ku jirto damiir wadinimo, daacadnimo, dareen qarameed iyo daljacayl Mudane Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid). Waxaana Ilaah oga baryaynaa in uu lagrab galo Amaanada uu u qaaday umadda Soomaaliyed kana dhigo kii u guta xilkiisa sida ugu wanaagsan,...
Kismaayo oo xaaladeeda amaan ay kasii darayso “Faah Faahin”
Tan iyo markii ay ciidamada dowlada Soomaaliya, Raaskambooni iyo kuwa Amisom ay la wareegeen Magaaladda Kismaayo ayaa waxaa lasoo sheegayaa in ay sii badanayaan falalka amaan xumadda ah ee magaaladda ka dhacaya. Waxaa lasoo sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay magaaladda ka dhaceen falal dhac iyo boob ah oo loo gaysanayo ganacasigii shacabka ee Magaaladda. Dad ku sugan Kismaayo ayaa Allgedo u sheegay...